Dinika:Vazimba - Wikipedia
1. Ny anarana foko na mponina amin’ny faritra na firenena iray dia atomboka amin’ny sora-baventy raha soratana. Ohatra : Arabo, Merina, Maley, Sakalava sns. Atomboka amin’ny soara-madinika kosa izy raha ampiasaina ho mpamari-toetra. Ohatra : fanjakana merina, mpanjaka arabo, mpanjaka maley, faritra sakalava sns.
2. Raha manondro mponina tokoa ny teny hoe vazimba dia tokony ho soratana manomboka amin’ny sora-baventy (Vazimba) toy ny hoe Malagasy ; fa raha manondro karazan-javatra (manana aina na tsia) kosa dia soratana manomboka amin’ny sora-madinika (vazimba) toy ny hoe kalanoro.
3. Ny anaran-tsamirery manomboka amin’ny Ra- na Andria- dia tsy ialohavan’ny mpanoritra i satria efa mahavoasori-tena : ny Ra- sy ny Andria- dia efa solon’ny mpanoritra. Toy izany koa ny anaran-tanàna manomboka amin’ny An- na Am- (ohatra: Antananarivo fa tsy i Antananarivo; sns).--Thelezifor (resaka) 10 Jiona 2018 à 16:50 (UTC)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinika:Vazimba&oldid=815981"
Voaova farany tamin'ny 18 Jiona 2018 amin'ny 16:51 ity pejy ity.